people Nepal » राशिफल : कार्तिक २ गते / अक्टोबर १९ तारिख बिहिबार राशिफल : कार्तिक २ गते / अक्टोबर १९ तारिख बिहिबार – people Nepal
राशिफल : कार्तिक २ गते / अक्टोबर १९ तारिख बिहिबार
Posted on October 19, 2017 by Purna Nanda Joshi
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल कार्तिक २ गते बिहीबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १९ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष औशी तिथी चन्द्रमा कन्या राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, दर्शश्राद्ध, लक्ष्मीपूजा दीपमालिका सुखरात्रि,हलो तथा निशि बार्ने –
सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्नेछ । तपाईका कार्यमा भएको त्रुटिको प्रतिपक्षीहरुले फाईदा लिन सक्नेछन साथै सामान्य अपजस को सामना पनि गर्नु पर्न सक्नेछन । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा समय उत्तम देखिएको छैन । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ । बिश्वासीला ब्यक्तिहरु बाट धोका हुन सक्नेछ ।
पारिवारिक मेल मिलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बिद्या प्राप्ति योग रहने छ । संगित क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानी नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु बृद्धि हुनसक्छन् । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । नेत्र सम्बन्धि समस्याले सामान्य खर्च हुनसक्ने योग रहेको छ । एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ ।
पुरानो लगानी उठाउने राम्रो समय रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । समय राम्रो रहेको छ ।
पारिवारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
मनोरञ्जन मूलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । भोज भतेरमा सरीक हुने समय रहेको छ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।
मनोरञ्जन मूलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । भोज भतेरमा सरीक हुने समय रहेको छ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य सुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।